जहाँ दुःख, त्यहाँ डा. केसी | Nagarik News - Nepal Republic Media
१ आश्विन २०७७ ४ मिनेट पाठ
दुइ दशक अघि डा. गोविन्द केसी दुर्गम क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य सेवा गर्न जुम्ला आइपुगे। उनी दुई साता जुम्ला बसे। बिरामीको स्वास्थ्योपचार गर्नेदेखि दुर्गममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य सेवा र उपचारका बारेमा सिकाए।
जुम्ला, मुगु र कालिकोटका स्वास्थ्यकर्मीसंग सिपको आदानप्रदान गरे। त्यो बेला कर्णालीमा स्वास्थ्य सेवा दिन विशेषज्ञ चिकित्सक पाउन निकै कठिन थियो। कार्यालय सहयोगीले स्वास्थ्य संस्था चलाउथे। जिल्ला अस्पताल एचए स्टाफ नर्सको भरमा चलेको हुन्थ्यो।
गाउँमा औषधि अभाव हुन्थ्यो। दक्ष जनशक्ति नहुँदा गाउँमा सामान्य रोगले समेत मान्छेको अकालमा मृत्यु भइरहेको हुन्थ्यो। त्यो बेला डा. केसी जुम्ला पुग्दा भगवान झै जुम्लाबासीले सम्झे। अहिलेसम्म डा. केसी तीन पटक जुम्ला आइसकेका छन्। एक पटक स्वास्थ्य सेवा दिन आएका डा. केसी पछिल्लो दुई पटक कर्णालीमा एमबीबीएस पढाइ हुनु पर्ने मागसहित सत्याग्रह बस्न आएका हुन्।
डा. केसी भन्छन्, ‘म देशका ७७ वटै जिल्ला पुगेको छु। त्यहाँको स्वास्थ्य र शिक्षा अवस्था बारेमा जानकारी राख्दछु।’ जहाँ पुग्यो, त्यहाँ लथालिङ र भताभुङ्ग देखिन्छ। चित्त बुझाउने ठाउँ कतै छैन्। यो बीचमा धेरै व्यवस्था फेरिए, तर अवस्था फेरिएन। अवस्था फेर्नको लागि मेरो सत्याग्रह हो।’
रामेछाप जिल्लाको खड्कदेवी गाउँपालिकामा जन्मिएका डा. केसी सानैदेखि अन्याय सहन नसक्ने स्वभावका थिए। आफू अन्याय नगर्ने र कसैले अन्याय गरेको खण्डमा नसहने स्वाभावका डा. केसी पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको अन्यायका विरुद्धमा संघर्षरत छन्।
‘म पनि दुर्गम ठाउँमा जन्मे, हुर्केँ। देशका सबै जिल्लामा पुगेँ। सबै जिल्लाको स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था बुझेको छु। भोगेको पनि छु’, डा. केसी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको अन्याय टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिन। ज्यान नै समर्पण गरेको छु।’
डा. केसीले एमबीबीएस, एमडीएमएस र फेलोसिप विदेशमै गरे। एमबीबीएस पढेर आइसेपछि उनी निरन्तर स्वास्थ्य सेवामा छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा के हुनु पथ्र्यो ? के भइरहेको छ ? सबै थाहा छ। कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत मान्छे ग्रामीण भेकमा बस्छन्। डा. केसीले भने, ‘भोक, रोग, बरोजगार र अशिक्षा त्यहाँ छ। सिटामोल खाना नपाएर मृत्यु सैइयामा छटपटाइरहेका छन्। यो सब राज्यले उपेक्षा गरेर भएको हो।’
अहिले पनि साधारण रोगको उपचार पाउँदैनन्। ठुला अस्पताल र शिक्षण संस्था सबै निजी छन्। शहरमै छन्। महंगो उपचार हुन्छ। गुणस्तरहिन सेवा छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामुलक नभई सरकारले व्यापार गरिरहेको छ।
राजनितिक दाउमा चलेको छ। माफियाहरुको पहुँचमा चलेको छ। डा. केसीको अनुभवमा पहिले स्वास्थ्य क्षेत्र स्वतन्त्र जस्तो थियो। अहिले स्वास्थ्य र शिक्षामा खुलेआम व्यापार जस्तो भएको छ। सेवामुलक संस्था नाफामुलक बनेका छन्। अहिले पनि शहरमा निम्न र मध्यम बर्ग उपचार पाउँदैनन्। विकसित देशमा स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क छ। भोट दिएर सत्तामा पुगेका नेताले जनताको श्रम पसिनामा ब्रह्मलुट गरिरहेका छन्।
डा. केसी यो बीचमा जनताको घरदैलोमा पुगे। उनले भने, ‘जनताको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ। मलाई मात्र थाहा छ। मैले बोलिन भने कसले बोलिदिने ? अन्याय त देख्नै सक्तिन। ’ सामाजिक न्यायको लागि जीवन मरणको लडाइ लडिरहेको छु।’
डा. केसी स्वास्थ्य सेवा तिर रहँदा तत्कालिन पार्टीका नेता, सरकार सबैलाई भेटेको अनुभव सुनाउँछन्। स्वास्थ्यसंग सरोकार राख्ने सबैसंग भेटघाट गर्यौँ, सरकारसंग छलफल गयोैँ। तर उनको सुनुवाइ भएन्।
‘त्यसपछि बारम्बार सत्याग्रहका माध्यमबाट माग संवोधनका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ। देशमा प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता स्थापित भएनन्। नेताहरु आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न उद्धत छन्। सबै स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनेका छन्।यो ब्यक्ति अपमानित भएर बसेका छन्। अयोग्यले नेतृत्व समालिरहेका छन्’, डा. केसीले भने।
पदाधीकारी नियुक्तीमा मापदण्ड बनाउन मागसमेत राखेका छन्। डा. केसीको पहलमा पदाधीकारी नियुक्ती मापदण्ड कार्यदल बनेको थियो।
कार्यदलले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ। तर त्यो प्रतिबेदन कहाँ छ, कुन अवस्थामा छ। अत्वपत्व छैन्। डा. केसीले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ९ बर्षमा १९ पटक अनशन बसिसकेका छन्। डा. केसीले जीवनभर न त कुनै पद लिए, न पद मागे, न सम्मान खोजे न सम्मान खोसे आफूले काम गरेर अध्यापन गराएर पाउने तलब पनि संकलन गरि उहि विपन्न बिरामी, दुःखी बिरामी भन्दै गाँउँ गाउँ पुगे।
भेटेजति देखेजति आएजति सबै दुःखी बिरामीलाई सहयोग गरे। डा. केसीले स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि न कसैसँग चन्दा लिए नत चन्दा नै मागे । सुगममा रहँदा सधैँ साझा यातायात चढे। दुर्गम क्षेत्रमा पैदल हिडेर डाडाँकाडाँ कुना कन्दरा पुगे।
सत्तामा नभएका (सबै पार्टीका) नेताहरु, अगुवाहरु, अभियानताहरु डा. केसीको माग हाम्रै माग हो भनेर कराउँछन्। सत्तापक्ष पनि सत्तामा नहुँदा डा. के सी अभियान हाम्रै भन्दै अघि बढ्छन्। नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महत भन्छन्,‘डा.केसी निमुख गरिब दुःखी पिडितका भरोसा हुनुहुन्छ। यो भरोसालाइ गल्न दिनुहुदैन्।’
प्रकाशित: १ आश्विन २०७७ १५:३३ बिहीबार